Indlu yeGlasi ePhambili kuDokotela uFoster Ngaba yi- $ 6m yeKhaya eliBekelwe bucala eSurrey - Amakhaya Osaziwayo Kunye Nezindlu Ezidumileyo
Indlu yeGlasi ePhambili kuDokotela uFoster Ngaba yi- $ 6m yeKhaya eliBekelwe bucala eSurrey
Indlu kaSimon Foster's swanky '£ 1 yezigidi' kwi-BBC One Ugqirha Foster Ngokwenyani likhaya lase-Surrey elixabisa i-6 yezigidi zeepawundi.
Ababukeli bebencanyathiselwe kwizikrini njengoko isiqendu sokuqala soludwe lwesibini ekudala silindelwe lubuyile, kwaye bashiyeka bevulekile umlomo njengekhaya elitsha likaSimon noKate Parks kwidolophu eyintsomi yaseParminster.
Ababukeli babukele njengoko uGemma, edlalwe nguSuranne Jones, enesiporho esijikeleze ipropathi engenanto - ngaphambi kokubanjwa ngumyeni wakhe owayesakuba ngumyeni uSimon (owayedlalwa nguBertie Carvel) -kwaye emva koko beza bengamenywanga ukujoyina iindwendwe kumbhiyozo.
Ngaphakathi kwikhaya lokwenyani elibonisa ngaphakathi Ugqirha Foster : Cofa apha ukuthatha ukhenketho
I-BBC I-BBC I-BBC
Ngexesha lesiqendu, uGemma wathi ku-Ros asebenza naye: 'Angakwazi njani ukuhlala kwiihektare? Uphantse wasibhanxa kwaye into eseleyo yaya kum, emva koko kwiminyaka emibini kamva ukwindlu yesigidi, kuqhubeka ntoni? '
Kubomi bokwenyani, indawo entle yokuhlala engaphandle yegumbi lokulala inegumbi lokulala ezine, igumbi lokuhlambela elinendawo ezintlanu isicwangciso esivulekileyo siphila , amagumbi abanzi, an ubuninzi bokukhanya kunye nezinto zangaphakathi ezibuyiselweyo.
Liyintoni ikhaya elakhiwe kwangaphambili? Fumanisa ukuba la makhaya eikiti ziphi na iindlela ezizezinye kulwakhiwo lwasekhaya lwasekhaya, apha.
Indlu esele yenziwe yenziwe ngabavelisi Indlu yeempuphu kumzi-mveliso wabo eJamani. Njengazo zonke ezinye izinto ezakhiwayo, indlu yathunyelwa ngenqanawa zisiya e-UK, emva koko yafakwa kwindawo leyo phakathi evekini kunye neqela lamagcisa angama-40 ukuya kwangama-50.
Indlu yeempuphu Indlu yeempuphu
UBill Twiston-Davies, umphathi wendawo yemveliso yeDrama Republic, uxelele Imeyile ngeCawa malunga nokukhangela kwabo indlu entle ukufanisa indlela entsha kaSimon: 'Sasifuna indawo yomlinganiswa oneengxowa zemali. Uye wemka ekucingelweni ukuba umoshakele kwaye ubuya ngexabiso enxibe imoto ebizayo nendlu ebizayo. Uyakuyibona indlu kuthotho lwamanqaku. Kuya kubangcono. '
Abanini bendlu bayishiya ipropathi- kunye nayo yonke ifanitshala- iiveki ezininzi ngexesha lokufota kwaye bahlawulwa malunga neepawundi ezingama-5 000 ngosuku, linika ingxelo iphephandaba.
iplani yegumbi lokuhlala
izityalo ezingadingi langa